» मोदीले खोपकार्डमा किन राखे आफ्नो तस्वीर ?
मोदीले खोपकार्डमा किन राखे आफ्नो तस्वीर ?
३ कार्तिक २०७८, बुधबार ०७:१४
काठमाडौं \_ कोरोनाविरुद्धको खोप प्रमाणपत्रमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको तस्वीर राखिएको विषयमा परेको मुद्दाबारे आगामी साता केरला हाइकोर्टमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
पीटर नामका एक व्यक्तिले खोप प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर राखिएकोमा आपत्ति जनाउँदै रिट दायर गरेका थिए । मोदीको तस्वीर नभएको खोप प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउन माग गर्दै उनले नेका छन्–मोदीको तस्वीर अंकित खोप प्रमाणपत्रले आफ्नो मौलिक अधिकारको हनन् भयो ।
मोदीविरुद्ध रिद दायर गर्ने ६२ वर्षीय पिटर भारतीय विपक्षी दल कांग्रेसका कार्यकर्ता हुन् । ‘मेरो खोप प्रमाणपत्रमा आफ्नो फोटो राखेर मोदीले नागरिकको निजी मामिलामा चोट पु¥याएका छन् । यो कार्य असंवैधानिक हो,’ कोट्टायमका उनले बीबीसीसँग भने, ‘म अनुरोध गर्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री मोदीले यस्तो लाजमर्दो हर्कत तत्काल बन्द गर्नुपर्छ ।’
पिटर प्रश्न गर्छन्–मेरो खोप प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर किन चाहियो ?
तर पिटरको तर्क छ, खोप लगाइसकेका व्यक्ति कोरोनाबाट बच्ने मापदण्ड पालनामा गर्ने व्यवहारबारे जानकार छन् । प्रमाणपत्रमा लेखिएको सन्देश उपदेश दिने बाहेक अरु खास केही छैन ।
पिटर भन्छन्, ‘मोदी न त हाम्रो पहिलो प्रधानमन्त्री हुन् न त खोप कार्यक्रम भारतमा पहिलो हो । तर कोभिड–१९ खोप अभियानलाई यस्तो देखाउन खोजिएको छ कि यो एक व्यक्तिको कार्यक्रम हो । जुन कार्यक्रम प्रधानमन्त्रीको प्रपोगाण्डा टुल हो ।’
सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क खोप लगाउन मानिसको लामो लाइन लाग्ने गरेका कारण आफूले निजी अस्पतालबाट खोप लगाएको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘मैलै प्रति डोजको ७५० रुपैयाँ तिरेको छु । त्यसैले मेरो प्रमाणपत्रमा मोदीको तस्वीर किन ?’
भारतको उत्तर प्रदेशमा दलित परिवारका चार जनाको हत्या